Tranga momba ny tetikasa - Shandong Guiyuan Advanced Ceramics Co., Ltd.
Miarahaba ny tetikasa vaovao
Tamin'ny 29 Oktobra, nametraka tamim-pahombiazana ireo singa dewatering Hubei Shengda Paper 5200/600. Ny masinina iray manontolo dia misy fitaovana vita amin'ny seramika Shandong Guiyuan. Hatreto dia misy tetikasa milina taratasy efa ho 50nos tohanan'i Shandong Guiyuan izay mahazaka mihoatra ny 150.000 taonina / taona.
Misaotra an'ireo mpanjifa rehetra nifidy ny marika SICER tamin'ny fahatokisany. Hitohy amin'ny fahombiazana sy zava-baovao ny SICER. Ny fankasitrahana tsara indrindra dia ny fiarovana ny tsipika famokarana an'ny mpanjifa amin'ny vokatra tsara sy serivisy tsara kokoa.
Tetikasa vaovao 5600/1000 milina taratasy mandeha tsara! Ny arc top teo aloha dia niaraka tamina singa fiasan'ny seramika serika SICER.
Misaotra an'ireo olona rehetra izay mampiroborobo ny lokon-tsivana fanodinam-bokotra haingam-pandeha. Misaotra ny fahatokisanao sy ny fanohananao.
Manoloana ny finoana matanjaka dia ho tsy misy dikany ny fahasahiranana rehetra.
Milina taratasy Guangxi 6600/1300 mandeha milamina mandritra ny herintaona
Miarahaba tsara an'i Guangxi 6600/1300 milina taratasy fiasan-dàlana ho an'ireo singa tsy ampy rano mandritra ny herintaona. Ny fitsidihana fiverenana dia nampahafantarina fa ny androm-piainan'ny tambajotra mpamorona dia efa hatramin'ny 10 volana, ary ny kalitaon'ny taratasy sy ny fanjifana angovo dia manaraka tanteraka ny fenitra eropeana.
Misaotra ireo manam-pahaizana Valmet tamin'ny fitarihana, fanampiana. Fisaorana ho an'ireo namana manamafy ny fifanakalozana sy fiaraha-miasa amin'i Valmet sy SICER.
Tetikasa milina mpamorona goavana no nandany ny fanaraha-maso nataon'ny mpanjifa
Tamin'ny 3 Jona 2017 boaty milina mpamorona lehibe tonga. Ny lanjan'ny boaty tsirairay dia manodidina ny 10 taonina. SICER no nanome ny seramika ambony.
Tamin'ny 13 Jona 2017, Andriamatoa Liu Geng, avy amin'ny orinasa mpanao milina fanaovana papermaking ary Andriamatoa Frank Brown, mpanjifa anglisy, dia nitsidika ny faritry ny zavamaniry vaovao ary nanandrana ny boaty sy ny seramika.
Tetikasa milina taratasy haingam-pandeha haingam-pandeha 5800/700 telo manomboka
Tamin'ny 29 Desambra 2016, India Triassic 5800/700 milina taratasy haingam-pandeha haingam-pandeha vita amin'ny seramika, nanomboka niditra tamin'ny dingana famaranana farany.
Ity fitaovana fanaovana taratasy ity dia ny milina fanaovana taratasy lehibe indrindra any Shina any India, ny taratasy malalaka indrindra, ny milina haingam-pandeha haingana indrindra, izay mandrotsaka ao amin'ireo haitao mandroso kokoa. Amin'ny anaran'ny tontolon'ny famokarana haingam-pandeha haavo haingam-pandeha avo indrindra, nataon'i Shandong Changhua taratasy Masinina sy famokarana orinasa mpamokatra.
Ny orinasa Changhua dia manome lanja lehibe ny kalitaon'ny ceramic ambony, mifanaraka amin'ny fampiharana taloha, ny marika import dia tsy maintsy ho ny safidy tsara indrindra. Safidio ny SICER amin'ity indray mitoraka ity, izay manondro fa ny marika SICER dia napetraka lalina ao am-pon'ny mpanjifa, ary ny kalitaon'ny vokatra dia eken'ny mpampiasa tanteraka. Tapitra ny tantaran'ny mason-tsivana haingam-pandeha monisipaly singa dewatering taratasy, hisy vokatra hafa hiseho.
Ity dia ho dingana lehibe ho an'ny SICER amin'ny milina haingam-pandeha vita amin'ny seramika vita amin'ny seramika ho an'izao tontolo izao, ary ity dia fotoana mety hanitarana ny tsena ivelany.
Miarahaba an'i Taizhou Forest 5200/900 milina taratasy tariby telo milamina tsara
Ny tetik'asan'ny milina taratasy 5200 an'ny singa dewatering izay noforonin'i Sicer ho an'ny tariby telo ho an'ny Taizhou Forest Paper Co., Ltd. dia dingana lehibe iray amin'ny fidirantsika amin'ny sehatry ny milina fanaovana taratasy haingam-pandeha. Ny hafainganam-pandehan'ny asa dia mahatratra 921 m / min, ary manimba ny ampihimamba vahiny an'ny dewatering amin'ny sehatry ny milina taratasy haingam-pandeha sinoa. Vokatr'izany, ny vokatra isan'andro dia nihoatra ny 1000 taonina, ary ny androm-piainan'ny fananganana tariby hatramin'ny 125 andro, 38.9% ny vidiny voangona noho ny marika vahiny misy tetik'asa mitovy amin'izany, nahitana vokatra mahavariana. Ny fividianana ireo vokatra avy any ivelany dia mitondra tombony lehibe ara-toekarena sy sosialy koa.
Ny singa Dewatering vita amin'ny keramika ampiasaina amin'ny milina famonosana taratasy 6600 dia nahomby tamin'ny fanekena
5 Janoary,2016,Ireo singa mandehandeha amin'ny keramika (ny halavany dia 7250mm, ny famolavolana ny hafainganana dia 1300m / min) ampiasaina amin'ny masinina taratasy famonosana 6600 izay nahomby tamin'ny fanekena ary napetraka ho amin'ny serivisy. Vitan'i Shandong Guiyuan Advanced Ceramics Co., LTD izy ireo.
Ireo vokatra ireo dia vita amin'ny akora vita amin'ny seramika manokana ary amin'ny alàlan'ny fivorian'ny mandroso, ny famatorana, ny fikikisana, izay novolavolain'i Sicer tsy miankina ary neken'ny besinimaro teo amin'ny tsena. Ny kalitaon'ny vokatra dia mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena.
Ny vokatra napetraka am-pamokarana am-pilaminana, izay hametraka fototra mafy orina ho an'ny fanatontoloana ny marika Sicer. Miarahaba antsika ny mpanjifa vaovao sy taloha hitsidika ny torolàlana ary hanome sosokevitra sarobidy.